डचटाउन डाइभ-इन फिल्म रात: कोको • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन डाइभ-इन फिल्म रात: कोको
घटनामा अगस्त २th @ :14::7० बेलुका
At मार्क्वेट पार्क
DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन यो गर्मी मार्केट पार्कमा फिर्ता आइसकेको परिवार मैत्री चलचित्र नाइटहरू होस्ट गर्दैछ! तपाईं, तपाईंको परिवार, तपाईंको छिमेकीहरू, र सबैलाई आमन्त्रित गरियो! यी घटनाहरू हुन् मुक्त समुदाय लाई।
अगस्टमा, हामी देखाउँदैछौं कोको मार्केट पार्क पोखरीमा! Ive:० सुरूमा डुबुल्नुहोस्, र चलचित्र यो अन्धकार हुने बित्तिकै जानेछ।
२०२१ को फिल्म नाइटहरू द्वारा प्रायोजित हो डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, रोजगार जडान र उपचार हिंसा, लुथरन विकास समूह, मूल क्रूसोको, सेन्ट जोसेफ हाउसिंग पहल, सेन्ट मेरी उच्च विद्यालय, थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, र टावर ग्रोव छिमेकी समुदाय विकास निगम। भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/movienight चलचित्र रातको बारेमा थप जानकारीको लागि।
7: 30pm – 11: 00pm
स्थान: मार्क्वेट पार्क
3969 एस Compton Ave.
आयोजक: DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन
अघिल्लो घटना: डचटाउन प्रचार समिति बैठक
अर्को घटना: डचटाउन संगठन समिति बैठक
तल दायर गरिएको सिनेमा. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. DT2, डचटाउन, परिवार मैत्री, मार्क्वेट पार्क, र सिनेमा. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस घटना साझेदारी गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो घटना अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अगस्ट 11th, 2021 .
डचटाउन STL.org घटनाक्रम सिनेमा डचटाउन डाइभ-इन फिल्म रात: कोको